eNasha.com - बलि-विरोधी मिस नेपाल
उत्कृष्ट पाँचमा उभिएका मिस नेपाल २००७ का प्रतिस्पर्धीहरुको मुटुको धड्कन तेजसँग बढिरहेको थियो । उनीहरुलाई आयोजकले एउटा खुटोमा कागज र कलमसहित तयार रहन निर्देशन दिइसकेका थिए । यी सुन्दरीहरुलाई प्रमुख न्यायाधीश चर्चित अभिनेता राजेश हमालले के प्रश्न सोध्लान् भन्ने कौतुकता दर्शक दीर्घा र स्वयम् प्रतियोगी नारीहरुलाई पनि लागिरहेको थियो । यत्तिकैमा अभिनेता हमालले सोधे- 'हाम्रा सबै परम्परालाई जस्ताको त्यस्तै रहन दिनु पर्छ कि समयअनुसार यसमा छलफल चलाई परिवर्तन पनि गरिनु पर्छ ?'
अन्य प्रतियोगीहरुले दिइएको तीन मिनेट समयभन्दा अघि नै उत्तर लेखिसकेका थिए । तर एउटी प्रतियोगी भने अरुले चाँडो सकेकोमा हतारिएकी थिइनन् । न त उनको अनुहारमा तनाव नै देखिन्थ्यो । सबैभन्दा ढिलो लेखिसिध्याएकी उनले भनिन्- 'हामीले हाम्रो परम्परा र संस्कृतिमाथि गर्व र त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ । हाम्रा परम्परा र संस्कृतिहरु चलिआएकै तरिकाले निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिन्छु । तर सँगसँगै हामी नेपालीले मान्दै आएको केही परम्परा जस्तै कि जनावरलाई बली दिने प्रथा हटाइनु पर्छ किनकि कुनै पनि संस्कृतिलाई हत्याको छुट दिइनु हुन्न । म आफ्नो संस्कृतिलाई सम्मान गर्छु र नेपाली हुनुमा गर्व गर्दै तिनलाई अपनाउँछु पनि । धन्यवाद !'
यही उत्तरका कारण ललितपुरकी शिताष्मा चन्द यस वर्षको मिस नेपाल २००७ घोषित भएकी छिन् । उनलाई सन् २००५ की मिस नेपाल ललितपुरकै सुगारिका केसीले क्राउन पहिरिदिएर चन्दको गालामा दुइ चुम्मा खाँदै आफ्नो मिस नेपालको आधिकारिकता समाप्त पारेकी थिइन् र शिताष्मालाई गर्विलो क्षण प्रदान गरेकी थिइन् ।
विमान परिचारिका तथा यामाहा म्युजिककी सेल्स एक्जुकेटिभसमेत रहेकी शिताष्माले अन्तिम समयमा प्रमुख न्यायाधीश राजेश हमालले सोधेको प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर दिएकी थिइन् । त्यत्तिकै राम्रो उत्तर दिने बन्दना शर्मा फस्ट रनरअप र श्वेता शाह सेकेण्ड रनर अप भएका थिए ।
शिताष्माले मिस नेपालको टाइटलबाहेक बेस्ट वाक र मिस पर्सनालिटीसँगै एक लाख रुपियाँ र काइनेटिक नोभा मोटरसाइकल हात पारेकी छिन् । कार्यक्रममा मिस ट्यालेन्ट सावित्रा श्रेष्ठ, मिस फोटोजेनिक बन्दना शर्मा, मिस ब्युटिफूल कम्प्लेक्सन रश्मी केसी, मिस ब्युटिफूल हेयर नानीमाया खड्का तथा मिस ब्युटिफूल स्माइल ऋचा शर्मा भएका थिए ।
कार्यक्रममा निकै सजिलो प्रश्नहरु सोधिएका थिए ।
कार्यक्रममा केही प्राविधिक गडबडी देखिए पनि अघिल्ला वर्षका भन्दा यो वर्षको कार्यक्रम केही रोचक भएको थियो ।
शनिबार मिस नेपाल कार्यक्रम नहुने भन्ने हल्ला चलिरहेको बेला माओवादी कार्यकर्ताहरुले कार्यक्रमस्थलबाहिर प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनका क्रममा तीन महिलाहरु घाइते भएको बताइएको छ । माओवादीका तर्फबाट सञ्चार मन्त्री भएका कृष्णबहादुर महरालाई मिस नेपाल कार्यक्रम नगराउन १४ वटा विभिन्न संस्थाहरुले दबाब दिएका थिए तर अन्तिम अवस्थामा यो कार्यक्रम भई छाड्यो ।
Miss Nepal 2007 Photo Gallery